अलिकति ज्वरो आएको छ के गर्ने होला ? भनेर छोरीले फोनमा कुरा गरेकेहि समयपछी ….. (भिडियो) – Sapana Sanjal
May 30, 2021 498
Sapana Sanjal : उमेरले २२ वर्ष मात्र टेकेकी थिइन् । कुशुम पहारीको विवाह पनि भएको धेरै समय भएको थिएन । उनीहरुको टिकटकमा निकै रमाइला भिडियोहरु छन् । तर कुशुमको मृत्यु भने निकै दुखद भएको छ । महामारीमा एक पछि अर्का दुखद घ,टना भएका सुनिएका छन् । तर यो घ,टना हृदय विदारक छ ।
सिन्धुपाल्चोक घर भई काठमाण्डौको कालिमाटीमा बस्दै आएका अजय श्रेष्ठले श्रीमती कुशुम पहरीलाई संसारवाटै विदा गरिदिएका हुन् ।
उनको शव देख्न सकिने अवस्थामा पनि थिएन । विहान साढे ७ वजे वुवालाई फोन आयो त्यती बेला छोरीले गरेकी थिइन् । वुढोलाई अलिकति ज्वरो आएको छ के गर्ने होला ? भनेर छोरीले फोनमा कुरा गरेकी थिइन् । कुरा गर्दा गर्दै फोन ठ्याक्कै छुटेको थियो । विवाह भएको ९ महिना मात्र भएको थियो ।
९ महिनाको बिचमा छोरी र ज्वाईको बीचमा तीन पटक विवाद भइसकेको थियो । उनले छोरीलाई माइत ल्याएर राखेका थिए । तर श्रीमानले म अब यस्तो गर्दिन म र क्सी खाँदिन भनेर माफी मागेर उनले माइतवाट ल्याएका थिए ।
तर यसरी संसारवाटै विदा गरिदेलान् भन्ने उनलाई लागेको थिए । दिनभरी कालिमाटीमा ब्यापार गर्ने राती घर आएपछि श्रीमानले जहिले पनि दुख दिन्थे । भर्खर लाउँ खाउँ उमेरकी छोरीलाई ज्वाईले सिध्याइदिएपछि बुवा आमा विह्वल भएका छन् । प्रहरीले घ,टनाको अनुसन्धान निष्पक्ष गरेको अभिभावको भनाई छ ।
घ,टना भएपछि अजयले आफ्ना भाईलाई फोन गरेका थिए । फोन गरेर कुशुमलाई मैले सिध्याएँ प्रहरी लिएर आइज भनेका थिए । जहिले पनि जिस्किएर त्यस्तै कुरा गर्ने गर्थे । त्यसैले उनलाई विश्वास लागेन ।
Prevबजेटमा प्रदेश १ : इटहरी-धरान मेघासिटी बनाइने, धरानबाट मुलघाट निस्किन सुरुङ मार्गविराटनगरमा विद्युतीय तार भूमिगत गरिने (बजेटको पुर्णपाठ सहित)